Ungagxili nje ku-Icebo le-SEO Iceberg | Martech Zone
NgoLwesithathu, Septemba 7, 2011 NgeSonto, Okthoba 30, 2011 Douglas Karr
Enye yezinkampani ze-SEO yayijwayele ukuba nesithombe se-iceberg ekhasini labo eliyisiqalo. Ngiyakuthanda ukufaniswa kweqhwa uma kukhulunywa ngokusetshenziswa kwenjini yokusesha. Ingxoxo esibe nayo neklayenti maqondana nokubuya kwabo kusabelomali sabo se-Search Engine Optimization ibinokukhathazeka okuthile kokuthi bebethola izivakashi ezimbalwa eziyingqayizivele ngonyaka odlule ibinzana legama elingukhiye besikhomba, sigqugquzela futhi silandelela.
Igama elingukhiye lihlukile impela futhi anginayo imvume yokwabelana ngalo…. kepha ekubukezeni kwabo analytics, ba ngamashumi ukuvakashelwa okuncane kuphela… ngalokho igama elingukhiye ngqo. Kodwa-ke, bekukhona ukuvakashelwa okucishe kube ngama-200 ngenyanga kusesho oluhlobene namagama angukhiye ngaphambi kokuba sisebenze ekwenzeni kahle. Ngemuva kohlelo lwe-SEO oluyimpumelelo olubayise ku- # 1, olukhule lwaba ngaphezu kokuvakashelwa okungu-1,000 XNUMX ngenyanga. Igama elingukhiye ngokwalo bekuholela kuphela ekuvakasheni okumbalwa ngaphambi nangemva kokuningi. Iklayenti belikala i- igama eliqondile hhayi yonke imigwaqo efanele, ehlobene.
Kwakunamagama angukhiye angama-266 ahlobene nokuthi iklayenti lalithola ithrafikhi ngaphambi kohlelo. Lokho kukhule kwaba yimishwana yamagama asemqoka ehlobene ayi-1,141 abebethola ithrafikhi ekunyuseni nasekusebenziseni okuthunyelwe. Lokho kuseshwa kwamagama angukhiye ahlobene ayi-1,141 kuholele ekutheni kuphele Izivakashi ezintsha ezingama-20,000 XNUMX esizeni. Lapho ubala imbuyiselo ku ukuthi utshalomali, impela ukunqoba. Lawo magama aziwa ngokuthi amagama angukhiye omude, futhi kwesinye isikhathi kunamakhasimende amaningi, imali nethuba lapho kunokulwa nalo mncintiswano ngamagama asemqoka aphezulu.
Iqiniso ukuthi i-SEO ayifani nokuthenga igama elingukhiye nge-PPC. Ukusesha kwe-organic kunethuba lokukhulisa ithrafikhi yakho ngenethiwekhi yonke yemishwana yamagama asemqoka ahlobene. Lokhu kubalulekile kucebo lakho lenjini yokusesha. Uma konke ukugxila kwakho ku ichopho leqhwa, awunaki amanani aphezulu wethrafikhi amatemu okusesha ahlobene akulethela wona.
Elinye isu lapho lokhu kuyinkinga ukuseshwa kwasendaweni. DK New Media muva nje wenze ucwaningo lwe-SEO enkampanini esekela izinsizakalo esebenza ezweni lonke. Ukuphromotha kwabo, okuqukethwe kwabo, isikhundla sabo sesayithi - amasu abo wonke we-SEO - kubhekiswe kuphela kumagama asuselwa kunkonzo jikelele ngaphandle kwe-geography.
Abancintisana nabo badla isidlo sabo sasemini - ukuthola i- izikhathi eziyikhulu traffic ngoba izimbangi ziqondise ngokuqondisisa i-geography ngesihluku njengesihloko sesevisi. Lapho le nkampani yayisebenza ne- Umxhumanisi we-SEO, i-geography ayivelanga ngisho nasengxoxweni ngoba amavolumu okusesha abengabalulekanga. Uchwepheshe we-SEO wagxila esicongweni seqhwa… futhi waphuthelwa u-90% + wokusesha kwegama elingukhiye elincane.
Inkampani isenkingeni… banendawo eningi yokuzama ukwakha uma benethemba lokuba ngumholi ekuseshweni okuhlobene nezinsizakalo. Iqiniso ukuthi usesho lwasendaweni yi Ithemu eyinhloko lapho ufuna izinsizakalo zesifunda. Ngeke ufune “ukuwashwa kwezimoto” ku-Google… uzofuna indawo yangakini noma idolobha ngaphezu kwe- “car wash”. Kungenzeka kungabi khona ukusesha okuphezulu kwe- “Albuquerque car wash”… kepha hlanganisa wonke amadolobha ase-United States ngokuwasha izimoto futhi leyo yinombolo ENKULU.
Kulungile ukuqondisa isu esicongweni seqhwa, ulilinganise, ulibheke, futhi ulilungiselele. Noma kunjalo, ungakhohlwa ukuthi usebenza ngethiphu kuphela!
I-Anatomy yomlandeli we-Facebook